Umaki: buyela ekolishi | Martech Zone
Maka: buyela ekolishi
Amasu we-5 wokushayela ukuThengiselwa okuningi ezikoleni ngo-2019
NgoMsombuluko, Agasti 5, 2019 NgoMsombuluko, Agasti 5, 2019 Douglas Karr
I-Back-to-School yisizini yesibili enkulu kakhulu yokuthenga yonyaka futhi umhlaba wedijithali usuyingxenye ebalulekile yokuthengwa kwendlela yekhasimende. Ukubuyela Ekusetshenzisweni Kwezikole Kulo nyaka, i-NRF ilinganisela ukuthi imali esetshenziselwa ukubuyela ekolishi iyodwa izolandisa ngezigidigidi zamaRandi ezingama-54.5. Kanye nokusetshenziswa kwe-k-12, inani lokuthenga ezikoleni lilinganiselwa ku- $ 80.7 billion, kwehle kusuka ku- $ 82.8 billion ngonyaka odlule. Ku-2018, amaphesenti angama-23 emali esetshenziselwe ukubuyela esikoleni yenzeka online. Kulo nyaka, amaphesenti angama-29 ezitolo zokubuyela emuva ezikoleni azoba